Gam akporo nchedo: kpuchido mkpanaka gi ma obu mbadamba gi site na ntuziaka ndị a | Gam akporo (Peeji nke 2)
Chọpụta ihe banyere njikọ a nke ejiri Google Play mepụta iji kwụsị malware na ngwa ngwa.
Facebook ga - agwa gị ka ịdekọ vidiyo na ihu gị
Chọpụta karịa Facebook na-aga ịme ka ikpebi ma ọ bụrụ na ị bụ onye ị na-ekwu na ị bụ na na ị bụghị bot.
Etu esi lelee akaụntụ akaụntụ Facebook gị
Chọpụta otu anyị ga - esi hu ma ọ bụrụ na mmadụ abanyela na akaụntụ Facebook anyị n’oge ụfọdụ n’enweghị ikike anyị.
Etu esi ahụ ụlọ ọrụ ndị nweta data gị na Instagram
Chọpụta karịa gbasara atụmatụ ọhụrụ na Instagram nke na-enye gị ohere ijikwa ụlọ ọrụ ndị nwere ohere ịnweta data nkeonwe gị.
Chọpụta usoro anyị ga - agbaso iji nwee ike ihu ma ọ bụrụ na mmadụ abanyela na akaụntụ Instagram anyị n’enweghị ikike n’otu oge.
Google na-eme ka ị mara ma ọ bụrụ na okwuntughe gị emebi ma ọ bụ enweghị nchedo
Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ọhụrụ a na Google nke na-agwa anyị ma okwuntughe anyị nwere nchekwa ma ọ bụ na ọ bụghị yana ihe anyị nwere ike ime iji melite ha.
Udo nchebe na Instagram! Data nkeonwe nke ndị ọrụ ekpughere
Chọpụta karịa gbasara ọgbaghara nche ọhụụ na Instagram nke gosipụtara data onye ọrụ ya na nọmba ekwentị ma ọ bụ email.
Otu n'ime ndị kasị mma Dialer maka gam akporo gị.
Ikuku Dialer na nnọọ uru ọrụ maka nche na nzuzo nke anyị ama na anyị na nọmba ekwentị.
Google ga-akwụ ụgwọ iji chọta chinchi na ngwa na Google Play
Chọpụta ihe banyere echiche a sitere na Google nke ga-akwụ ụgwọ iji chọta chinchi na ngwa dị na Google Play iji melite ogo na nchekwa ha.
Google Chrome ga-agwa gị ma ọ bụrụ na okwuntughe gị abanyela
Chọpụta ihe banyere atụmatụ ọhụrụ na Google Chrome nke ga-agwa gị ma ọ bụrụ na okwuntughe gị abanye na ntanetị.
Nchịkọta nke FaceApp nwere ike ịnwe malware
Chọpụta ihe banyere ihe egwu achọpụtara n'ihi ụfọdụ akwụkwọ FaceApp nke nwere malware na adware n'ime.
Etu esi ewepu ohere na akaụntụ Google gị na ekwentị ochie gị
Chọpụta ihe banyere otu esi ewepụ ohere na akaụntụ Google gị na ekwentị gam akporo ochie gị iji zere nsogbu nchekwa.
Etu esi amata ma ngwa gị ọ dị mma
Chọpụta ngwa ọrụ kachasị mma iji mara ma ngwa ndị ị nwere na ekwentị gam akporo gị dị mma ma zere nsogbu ndị dị ka.
Google Play wepu ngwa asaa nke ledoro mmadụ
Chọpụta ihe gbasara ngwa ndị a ewepụrụ na Playlọ Ahịa Google n'ihi na ha raara nye ndị na-emegbu ndị ọrụ na gam akporo.
Ndị ọrụ Google na-ege ntị na audio nke Google Assistant na Google Home chịkọtara
Chọpụta karịa gbasara Google Home na Google Assistant audios nke ndị ọrụ Google nwere ike ige ntị ma nwee data nkeonwe.
Nnyocha na-achọpụta ihe karịrị ngwa ngwa adịgboroja 2.000 na Google Play
Choputa ihe banyere ihe omumu a nke choputara na ihe kariri puku ngwa abuo abuo na Google Play taa ma ewepu ha nile.
Anyị na-agwa gị otu ị ga - esi gbochie WhatsApp na paswọọdụ ma ọ bụ jiri mkpịsị aka mkpịsị aka. Ngwa kachasị mma na ụzọ iji kpuchido mkparịta ụka gị.
Europe kwadoro na ịmepụta ndepụta ndị na-eweta ngwaahịa maka 5G
Chọpụta ihe banyere ndepụta ojii nke a ga-adọta na Europe iji gbochie ụfọdụ ụlọ ọrụ ịrụ ọrụ na mmepe nke 5G.
ANDROID ALERT !!: BeiTaAd, adware zoro na ngwa 238 na Google Play
Chọpụta ihe niile banyere BeiTaAd adware nke dị na ngwa 238 na Google Play ma budata ya ugboro 440.
WhatsApp anaghịzi enye gị ohere ịchekwa foto profaịlụ nke kọntaktị gị. N'ezie?
Nke a ọ bụ eziokwu na ị ghọtara na WhatsApp anaghịzi enye gị ohere ịchekwa foto profaịlụ nke kọntaktị gị ma ọ bụ, enwere ụzọ iji gafee nchebe a?
Google na-emezigharị usoro iwu mbipụta na Google Play
Choputa iwu ohuru nke eweputara n'ime atumatu mbipute na Google Play nke di ugbu a n'ike.
Chọpụta ọnụ ọgụgụ dịgboroja nke akaụntụ adịgboroja nke Facebook wepụrụ afọ a na nsonaazụ nke a nwere maka ya.
Chọpụta usoro iji kpochapụ koodu PIN na kaadị SIM gị na gam akporo ma si otú a ghara ịbanye ya mgbe ị banyere ekwentị.
Otu esi echebe WiFi gị ka onye ọ bụla wee banye na netwọk gị
Chọpụta ndụmọdụ dị iche iche anyị nwere ike iburu n'uche mgbe ị na-echebe WiFi nke ụlọ anyị megide mwakpo ma ọ bụ mgbochi ọ bụla.
Chọpụta mgbanwe niile ga-abata n'ọhịa nke nzuzo gam akporo n'oge na-adịghị anya, ewepụtara ya na Google I / O 2019.
Chọọ karịa gbasara ngwa isii ndị a ewepụrụ na Google Play ewepụrụ maka igwu ad.
Chọpụta karịa usoro Google Play na-eme iji mee ka usoro nyocha ngwa gaa nke ọma.
Google na-ebipụta akụkọ nchedo gam akporo 2018 gam akporo
Chọpụta karịa gbasara akụkọ gbasara nchedo gam akporo 2018 nke Google ebipụtala ugbu a ma nye anyị ohere ịhụ data a.
Firefox Lockbox: njikwa paswọọdụ Mozilla bịara gam akporo
Chọpụta karịa gbasara mwepụta Firefox Lockbox, njikwa ọhụụ ọhụụ ọhụrụ nke Mozilla wepụtara na gam akporo.
Otu esi mepụta nkwado ntuziaka nke gam akporo na Google Drive
Chọpụta otu anyị nwere ike isi mee nkwado ndabere na ekwentị gam akporo anyị wee chekwaa ya na Google Drive.
Obi ọjọọ ngwa ọdịnala na-eme ka egwuregwu na-ewepụ Play Store
Chọpụta ihe banyere ngwa ndị a dị njọ nke abanyela na Storelọ Ahịa Play ma nwee ihe karịrị nbudata 500.000 na mkpokọta.
Chrome 68 egosiworị peeji ndị na-enweghị HTTPS dịka echedoghi
Google Chrome 68 na-egosi ibe na-enweghị HTTPS dị ka enweghị nchebe. Chọpụta ihe gbasara mmelite ihe nchọgharị gam akporo.
Google nyochachara Australia maka nsogbu na gam akporo
Google nyochara n'Australia maka ọrịre data onye ọrụ na gam akporo. Chọpụta karịa gbasara nyocha ụlọ ọrụ ahụ chere ihu maka ụdị azụmaahịa ya.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo ngwa ịchịkwa nzuzo gị gam akporo na gị arụnyere ngwa na ị na-adịghị afọ ojuju na a mfe App mkpọchi, m n'aka na ị na-aga a n'anya ngwa.
WhatsApp na-amanye ndị ọrụ iji gosi na ha dị afọ 16
WhatsApp jụrụ ndị ọrụ ya iji gosi na ha dịkarịa ala afọ 16. Chọpụta karịa maka akara njikwa ngwa ọhụụ iji rube isi n'iwu ọhụrụ nke Europe.
Google kwụọla $ 2,9 maka nsogbu ndị achọtara
Google kwụrụ $ 2,9 maka nsogbu nke achọtara. Choputa ihe banyere ugwo ndi kompeni mere maka ichota chinchi.
Bitdefender: The Ultimate Antivirus maka gam akporo
Bitdefender Mobile Security: Ihe kacha mma antivirus maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere antivirus a na ihe nchebe maka gam akporo. Ihe kachasị mma anyị nwere ike ịchọta taa.
Aghụghọ iji melite nzuzo na gam akporo
6 mfe aghụghọ iji melite nzuzo na gam akporo. Chọpụta aghụghọ ndị a ị nwere ike iji melite nzuzo nke data gị na ngwaọrụ gam akporo gị.
E wepụrụ ihe karịrị 700.000 ngwa ọjọọ na Google Play n'ihi AI
Ejiri 700.000 ngwa ọjọọ wepu na Google Play na 2017. Chọpụta ihe banyere ọrụ nchekwa Google mere n'afọ gara aga.
3 Sonic egwuregwu ihihi onwe player data
3 SEGA Sonic egwuregwu ihihi onwe player data. Choputa ihe banyere onu a n’egbo SEGA egwuregwu di na Google Play.
Ndụmọdụ iji zere itinye ngwa ọjọọ na ekwentị anyị
Otu esi egbochi ịwụnye ngwa na ekwentị anyị. Chọpụta ndụmọdụ ndị a iji nyere gị aka izere ịwụnye ngwa ọjọọ.
Etu aga - esi kwado SMS na ndekọ oku na-enweghị mgbọrọgwụ
Bara uru video nkuzi nke m na-akụziri ha ka ha ike ndabere nke SMS na oku na-enweghị na-akpata na nti iji weghachi na otu ọnụ ma ọ bụ dị iche iche ọnụ.
S6 ihu + melite nchekwa maka Disemba dị ugbu a
Mmelite nchedo nke Galaxy S6 ihu + nke kwekọrọ na ọnwa Disemba, amalitelarị ịnwe ndị ọrụ niile, na mbido ya amalite ọzọ na China.
Samsung weputara nchedo nchekwa maka Galaxy A7 (2017)
Ihe njedebe nke Galaxy A7 2017 dị ugbu a nwere mmelite nche kachasị ọhụrụ nke Samsung kwalitere.
The Galaxy A3 2016 na A3 2017 na-enweta mmelite nche ọhụrụ
The Galaxy A3 2016 na A3 2017 ka natara mmelite nche ọhụrụ, mmelite nke na - emekwa ka arụmọrụ nke ụdị abụọ ahụ dị mma ma na - edozi obere chinchi.
Loapi: Malware na-eji ngwaọrụ gị emee cryptocurrencies
Jiri ngwaọrụ gị Loapi malware na-egwupụta cryptocurrencies. Chọpụta karịa maka malware a na-emetụta ngwaọrụ gam akporo taa.
Achọpụtara spyware ndị si Adups ọzọ gam akporo
Adups: Chinese spyware achọpụtara ọzọ na android. Chọpụta ihe banyere spyware a kụrụ gam akporo afọ gara aga.
Wepu ngwa 85 nke zuuru okwuntughe na Storelọ Ahịa Play
Google wepụrụ ngwa 85 na Storelọ Ahịa Playlọ zuru ohi okwuntughe. Chọpụta ihe banyere ngwa ohi paswọọdụ.
Mere iji wụnye nne na nna akara na ụmụ gị mobile
3 ihe mere na-eji nne na nna akara na ụmụ gị mobile. Chọpụta ihe ndị a mere o ji dị mma iji njikwa ndị nne na nna.
Igodo nke ịlele maka mmelite agbajiri na ụfọdụ gam akporo. Chọpụta ihe banyere ahụhụ a nke mere na ekwentị gam akporo.
Google Play ga-eme ka nzuzo nke data njirimara rụọ ọrụ
Google Play ga-adọ gị aka ná ntị banyere ikikere ngwa ngwa na-enweghị isi. Chọpụta ihe banyere usoro nchekwa ọhụrụ na ụlọ ahịa ahụ.
Mmelite nchedo ọhụụ maka Galaxy Note 8 dị ugbu a na mba ụfọdụ, mmelite na-ewetara anyị ozi arụmọrụ
Mmelite nche kachasị ọhụrụ maka Galaxy S8 na S8 + nwere nkwarụ ngwa ngwa
Mmelite nche kachasị ọhụrụ maka Galaxy S8 na S8 + yiri ka emebi emebila usoro sistemụ ọsọ ọsọ nke ọnụ ahịa ndị a.
Facebook ga - ajụ gị maka selfie iji nyochaa njirimara gị
Facebook ga - ajụ gị maka selfie iji nyochaa njirimara gị. Chọpụta karịa gbasara ọnụọgụ ọhụrụ nke netwọkụ mmekọrịta ga-ewebata n'oge na-adịghị anya.
Atọ n'ime ngwa anọ dị na gam akporo na-eso anyị
Atọ n'ime anọ gam akporo ngwa ọdịnala soro ndị ọrụ. Chọpụta ihe gbasara ngwa ndị a yana otu ha si enweta ozi.
Google choputara spyware nke metutara WhatsApp
Nke: Spyware nke na-enweta data nkeonwe na WhatsApp na ngwa ndị ọzọ. Chọpụta ihe banyere spyware na-emetụta ọtụtụ ngwa.
A na-ezuru data onye ọrụ OnePlus kwa awa isii
A na-ezuru data site na ekwentị OnePlus kwa awa isii. Chọpụta karịa gbasara nsogbu nchekwa na nzuzo a.
BankBot: Trojan na-ezuru data akụ na-achọpụta na ngwa ngwa tọọchị
BankBot: The Trojan na-ezu ohi data achọpụtara na tọọchị ngwa. Chọpụta ihe gbasara nsogbu nchekwa a.
Ekwentị gam akporo gị maara ọnọdụ gị ọbụlagodi na ọ nwere nkwarụ
Ekwentị gam akporo gị maara ọnọdụ gị ọbụlagodi na ọ nwere nkwarụ. Chọpụta ihe banyere nkwupụta nke a manyere Google ime.
A na-awakpo gam akporo gam akporo malware ọ bụla 10 sekọnd
Oge ọ bụla 10 a malware na-awakpo ngwaọrụ gam akporo. Chọpụta ihe banyere data a nke na-egosi nsogbu nchekwa na sistemụ arụmọrụ.
OnePlus na-etinye ngwa na ekwentị gị nwere ike ịgbanye mgbọrọgwụ
OnePlus na-etinye ngwa na ekwentị gị nwere ike ịgbanye mgbọrọgwụ. Chọpụta ihe banyere ngwa nke Qualcomm mepụtara.
Google Chrome 64 ga-egbochi mgbasa ozi na-eduzi gị na ibe ndị ọzọ
Google Chrome 64 ga-egbochi mgbasa ozi na-eduzi gị na ibe ndị ọzọ. Chọpụta karịa banyere ihe ọhụụ na Chrome 64.
Nwere ike ibudata mmelite BlueBorn mgbochi malware maka Samsung Galaxy J5 (2017) ...
Otu esi agbanye gam akporo gị na igwefoto nledo
Mụta otu esi enye ekwentị ochie gị ekwentị nke abụọ site na iji ya dị ka igwefoto nledo dị irè n'ụlọ ma ọ bụ na-arụ ọrụ
Mmetụta dị na WhatsApp na-eme ka o kwe omume ịmata mgbe mmadụ abụọ na-agbanweta ozi, ma ọ bụ mgbe onye ọrụ na-ehi ụra
Kaspersky ngalaba-nchoputa na-akwadebe a mobile nchebe megide nledo na data collection
Natalya Kaspersky na-etolite ekwentị Taiga nke ga-echedo ndị ọrụ ya na nchịkọta data site na ngwa.
Akwụ nkwụ na nchekwa ụlọ na mwepụta nke ngwaahịa atọ ọhụụ
Nlọ ọrụ akwu na-eweta usoro nchekwa ụlọ ya nke mbụ, akwu Secure, dị mfe, bara uru ma na-esonyere ngwa ndị ọzọ
Kpachara anya maka DU Antivirus Security !! Anakọta ozi onye ọrụ na-enweghị nkwenye
Kpachara anya maka DU Antivirus Security, ngwa nke, dị ka Check Point si kwuo, ụlọ ọrụ nchekwa na-eduga na-akọ na ọ gaara ezu ohi data na-enweghị nkwenye.
Otu esi amata ma ọ bụrụ na ekwenti gị enweghi nsogbu na Blueborne
N'ime nkuzi vidio a a kọwara m otu esi amata ma Blueborne metụtara ekwentị gị yana ị nye gị ndụmọdụ bara uru iji zere ya.
Blueborne, gam akporo malware ọhụrụ maka Bluetooth
BlueBorne bụ ihe ngwanrọ gam akporo nke na-emetụta ihe karịrị nde 8.400 site na nsogbu nke Bluetooth
Samsung KNOX emelitere ma melite
Samsung KNOX, usoro nchekwa nke Samsung bu ụzọ zubere maka azụmahịa, emelitere ma wetara anyị ọrụ na akụkọ ọhụrụ.
Oxygen OS 4.1.7 melite maka OnePlus 3 na 3T na-etinye ahụhụ na nchedo
Oxygen OS 4.7.1 ohuru wepụtara maka OnePLus 3 na OnePlus 3T naanị gụnyere mmezi ahụhụ na ndozi nche
The Purism Librem 5 bụ ekwentị zuru oke maka ndị na-akwado nchekwa zuru oke
Purism Librem 5 bụ ama ama esote site na ụlọ ọrụ Purism, yana sistemụ arụmọrụ dabere na Debian GNU / Linux na oke izo ya ezo.
Olee otú hackers nwere ike ledoo gị mobile ma ọ bụrụ na ị na-ewere maka idozi na unofficial emmepe
Kpachara anya mgbe ị na-arụzigharị mkpanaka gị na ebe ndị agbata obi n'ihi na ị nwere ihe egwu nke ịbụ onye nledo na ngagharị gị niile edepụtara na ịntanetị.
Qualcomm na-ekwupụta teknụzụ ọhụụ maka gam akporo ekwentị ese foto
Qualcomm Spectra bụ igwefoto igwefoto abụọ nwere ike nyochaa omimi nke ubi na ịchọpụta mmegharị na ezigbo oge na ekwentị gam akporo.
Samsung na-ebibi 3% nke ihe ndekọ batrị ya kwa ọnwa maka nchekwa onye ọrụ
Iji mee ka nchekwa nke ndị ọrụ, na mgbe Galaxy Note 7, Samsung na-ebibi 3% nke ngwa batrị ya kwa ọnwa
Anyị na-egosi gị otu esi ewepu nje na gam akporo na usoro ole na ole dị mfe ma si otú ahụ chọta ngwa ahụ ma hichapụ ya. Bu oria? Chọpụta!
Anyị na-egosi gị otu esi edozi nsogbu ihuenyo na gam akporo M na anyị na-egosi gị ebe ntọala ga-gbanyụọ mkpuchi.
Google nwere ike ịgwa ndị ngwa na-arịọ nke ukwuu ozi nzuzo si n'aka ndị ọrụ
Google ewepụtala igwe na-amụ algorithm nke na-enye ohere ịchọpụta mgbe ngwa chọrọ ikikere karịa ka ọ chọrọ
Nwere ike ugbu a mee nkwado ndabere akwụkwọ nke gị Mac ma ọ bụ PC na Google mbanye
N'ikpeazụ, Google wepụtara nkwado ndabere na mmekọrịta mmekọrịta nke ị nwere ike iji na Mac ma ọ bụ PC yana Google Drive.
Android Alert! Spy Dealer ọhụrụ malware na stalks gị gam akporo!
Android Alert! Kpachara anya na ngwa ndị ọzọ mgbe ị na-ebudata, ịnwere ike ibute ihe ize ndụ nke ikpughe data gị.
You maara "Ọnọdụ ụjọ" nke gam akporo 7.1 Nougat?
Ọhụrụ gam akporo 7.1 Nougar melite na-agụnye ọnọdụ ụjọ iji lụso ngwa egwu aghụghọ na-egbochi onye ọrụ ịhapụ ha
Ihe ohuru nke ohuru nke July di ugbu a maka Pixel na Nexus
Ihe onyonyo sistemu na OTA maka ntinye nke ihe ncheta onwa ohuru a di ugbua. Kedu ihe ị na-eche iji wụnye ya?
Kpachara anya na NotPetya ọhụrụ Ransomware nke na-etinye ụwa na nche, anyị na-akụziri gị ka ị chebe onwe gị pụọ na egwu egwu a dị egwu.
The kacha mma mkpọchi ihuenyo maka gam akporo
The kacha mma mkpọchi ihuenyo maka gam akporo na-enweghị adịkwa akara mkpisiaka ọrụ na Samsung ọnụ na ọtụtụ na-akpali nhọrọ.
Mgbe ha mere nnyocha sara mbara, AV-TESTCHA gosipụtarala ngwa antivirus kacha mma maka gam akporo. Chọpụta ihe ha bụ wee budata nke ịchọrọ.
Android Alert !!: Kpachara anya maka kskas.apk
Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị na - ebudata ngwa na mpụga Storelọ Ahịa Play, kpachara anya maka sọftụwia ọjọọ ọzọ akpọrọ kskas.apk
WannaCry ransomware gaara eme ya ka ọ bụrụ gam akporo
Onye a ma ama WannaCry ransomware nwere ike inwe nsụgharị ya maka gam akporo, WannaLocker, dị ka akụkọ Avast si kwuo mgbe ụfọdụ ụfọdụ mere na China.
Akwụ na-ebupụta Nest Cam IQ igwefoto nche ụlọ
Ngwunye ụlọ na-ebupụta igwefoto nchebe ime ụlọ ọhụụ, Nest Cam IQ, nwere ike ịiche ndị mmadụ na anụ ụlọ.
Judy malware na-eweta gam akporo ihu
Ọnye na-bụ Judy? Ọ bụ malware ọhụrụ ahụ na-eweta gam akporo ihu igwe, ebe a na-eme atụmatụ na ọ nwere ike ibute ọtụtụ nde ndị ọrụ.
Iji gam akporo O ị ga - eme ka nkwenye nke ngwa na ọrụ dịkwuo mma site na SMS
Android O ga-eme ka usoro nnwale njirimara doo anya ma mee ngwa ngwa site na iji koodu SMS na ngwa na ọrụ
Ihe ngosi Android!, Gini bu ihe mgbaputa na otu esi egbochi ya?
Anyị na-akọwa ihe Ransomware bụ, otu ọ nwere ike isi metụta gam akporo gị yana ihe ị nwere ike ime iji nwee nchekwa ma chebe site na malware a dị ize ndụ
McAfee antivirus ga-ebute tupu arụnyere ya na Samsung Galaxy S8 niile
McAfee VirusScan bụ ihe mmemme antivirus nke arụnyere na ngwaọrụ niile dị na Samsung Galaxy S8 nso.
Otu afọ nke Netflix n'efu? Ọgbaghara ọhụrụ ahụ na-agbasa na WhatsApp
Ndị uwe ojii mba ahụ dọrọ aka na ntị banyere atụmatụ aghụghọ ọhụrụ site na WhatsApp na-enye ndenye aha Netflix n'efu maka otu afọ
Worldwa niile nọ na nche n'ihi egwuregwu a dị egwu ma na-egbu egbu nke na-emetụta ọtụtụ puku ndị ntorobịa gburugburu ụwa.
Ihe karịrị ngwa 400 sitere na Storelọ Ahịa Play nwere ike ịbụ ngwangwa
Ihe karịrị ngwa gam akporo Play Store achọpụtara na ọ nwere ike ibuso mwakpo malware na izu ohi data
Otu esi enyocha apk gị maka ọrịa nwere ike ibute
Na nkuzi ohuru ohuru a site na ndụmọdụ, aga m akụziri gị ka ị nyochaa ngwa gị maka ịchọ ọrịa, nje ma ọ bụ malware.
Kacha mma gam akporo ndabere ngwa
Taa na Androidsis anyị na-amam a nhọrọ na ụfọdụ ndị kasị mma ngwa na-eme ka ndabere akwụkwọ gị gam akporo ọnụ
Google wepu ngwa “Sistemụ Nwelite” na fromlọ Ahịa Play
Google ewepụla Sistemụ Nwelite Sistemụ site na Storelọ Ahịa Play n'ihi na n'eziokwu, spyware nke ebudatara ọtụtụ nde ugboro
Spy nde kwere nkwa na mmelite kacha ọhụrụ maka gam akporo arụnyere ọtụtụ nde ndị ọrụ
Ọtụtụ nde ndị ọrụ wụnye ngwa spyware site na Storelọ Ahịa Play nke kwere nkwa mmelite kacha ọhụrụ gam akporo, dị ka Zscaler si kwuo.
Esi ndabere WhatsApp chats na a ederede faịlụ
Mgbe ahụ, m na-akọwa na naanị nkeji ise esi eme otu ndabere WhatsApp chats na faịlụ ederede
Video Tutorial: 3 tozọ ndabere WhatsApp externally (kọwara na nkeji ise)
Android bara uru video nkuzi na nke na dị nnọọ nkeji ise m na-akọwa 3 ụzọ ndabere WhatsApp externally.
Taa na Androidsis anyị na-ewetara gị nhọrọ na ụfọdụ ngwa nche kacha mma maka ngwaọrụ gam akporo gị
Akụkọ Nokia kachasị ọhụrụ na-ekpughe mmụba 400% na ọrịa nje malware, ihe ka ọtụtụ na njedebe gam akporo
Nokia ebipụtala akụkọ ọhụụ "Akụkọ Egwu Ọgụgụ Egwu" nke na-ekpughe nnukwu mmụba na ọrịa malware na gam akporo.
Foto Google na-agba ọsọ nkwado ndabere na mpaghara ọnọdụ njikọta esighi ike
Foto Google nwere atụmatụ ọhụrụ abụọ na-agba ọsọ nkwado ndabere na mpaghara iji kesaa mgbe njikọ intaneti adịghị ike
Mgbe ọnwa iri na asatọ nke nkwa, Samsung na-ewepụta mmelite nche kwa ọnwa maka ekwentị agbachi agbachi na United States.
Nest na-akwadebe mmelite nke ngwaahịa nchekwa ya
Nest na-akwadebe mmelite na katalọgụ nke ngwaahịa nchekwa ụlọ amamịghe nke ga-ahapụ ọzọ ọdịda
Firmlọ ọrụ nchekwa Palo Alto Networks hụrụ malware na-ebute 132 ngwa gam akporo etinyere na Indonesia site na ndị mmepe dị iche iche
Taa, anyị na-egosi gị otu esi ahazi ekwentị gị ka ọ bụrụ na ọnọdụ mberede ha nwere ike inyere anyị aka ịkpọtụrụ kọntaktị anyị chọrọ site na usoro anyị.
Apple na-akpọ ndị ọrụ ya ka imelite ya na iOS 10.2.1 n'ihi ajọ nsogbu na nchekwa
Apple na-akpọ ndị ọrụ niile nke sistemụ arụmọrụ iOS ya na mmelite ngwa ngwa na iOS 10.2.1 n'ihi nnukwu nsogbu na nchekwa.
Google na emejuputa ohuru ulo oru ohuru na G Suite tinyere ihe ohuru na nchedo oru na njikwa
ANDROID MARA !! HummingBad na-eti ọzọ na oge a ka ọ na-abanye na Playlọ Ahịa Google
Ọhụrụ a gam akporo njikere anyị na-ekwu banyere HummingBad, a malware na zoro ezo kpọmkwem n'ime Play Store na-ahụrụ na 20 ngwa.
Etu ị ga-esi kpuchido ngwa arụnyere na gam akporo anyị n'otu n'otu ... ma ọ bụ
Taa, anyị na-akụziri gị otu esi echedo ngwa gị na ngwa n'efu, na-enweghị mgbasa ozi na enweghị ịzụrụ ihe n'ime ngwa nwere ọkwa ezinụlọ na-aga nke ọma.
Facebook ugbu a na-enye nchebe ọzọ site na nkwado nkwado USB
Nnukwu ihe ọhụụ maka nchekwa nke akụkọ ndị ahụ na nkwado nke Facebook na igodo nchekwa USB nke na-enye ohere itinye mgbakwunye oyi akwa.
Ihe ohuru nke Xperia X Concept na-eweta onodu uzo na ihe nche
Sony etinyela na nsụgharị kachasị ọhụrụ nke Xperia X Concept na-ewu ọnọdụ abalị ọhụrụ nke na-ebelata ọkụ na-acha anụnụ anụnụ maka ịgụ obi ụtọ.
Tupu ya enweta aka, Android na - achọpụta malware site na DOI metric nke Google kọwara taa.
Ebumnuche Key Key nke Google chọrọ iji melite nchekwa nke ezoro ezo nke ọha
Igodo doro anya bụ atụmatụ Google nke ọ na-ezube iji melite njirimara nke igodo nzuzo ọha
'Doorzọ azụ' dị na WhatsApp na-enye ohere nyocha na ozi ezoro ezo
Guardian kwenyere na WhatsApp dị n'azụ azụ ka dị mgbe achọpụtara ya n'April afọ gara aga.
Kpachara anya maka adịgboroja Super Mario Run APK, ha na-ezu ohi ozi ụlọ akụ
Super Mario Run ga-abata, mana ọ bụ ezie na ụfọdụ nwere ohere iji bipụta APKs nwere malware.
Kpachara anya maka ngwa Super Mario na-agba ọsọ maka gam akporo
Kpachara anya, ndị ọrụ gam akporo, jiri ngwa Super Mario Run adịgboroja na-abawanye na ịntanetị mgbe mmalite egwuregwu ahụ maka iOS.
Ndị nhicha ma ọ bụ ndị na-ehichapụ akpaaka maka gam akporo dị mkpa n'ezie?
Ọ bụrụ na ị jụọla onwe gị ajụjụ gbasara ma ndị na-ehicha aka maka gam akporo dị mkpa n'ezie, nke a bụ echiche m sitere n'obi.
Gam akporo 7.1.1 na-abịa Nexus na December 5 nche patch
A ga-ebido Nougat gam akporo 7.1.1 Nougat maka ngwaọrụ Nexus na Pixel na mbido ọnwa Disemba, dabara na ndokwa nchekwa nchekwa ahụ.
Ọnwụ nke Rita Barberá na-eme ka otu onye nje virus a na-ebo ebubo nke Rita Barberá na-agba egwu na-eme ka ọ dịghachi ndụ
Anyị na-agwa gị eziokwu niile gbasara Rita Barberá ịgba egwu vidiyo na-agbasa dị ka ọkụ na WhatsApp.
Kpachara anya maka azụmahịa Black Friday
Tupu ịmalite n'ime Black Friday, buru n'uche na ha nwere ike inye gị mkpuchi. Chee echiche banyere ihe ị chọrọ ma jiri nlezianya lee ọnụ ahịa tupu enye.
Taa, m na-akuziri gị otu esi ezobe foto na gam akporo, foto na ozi ederede maka nnyefe echekwara site na email ma ọ bụ ngwa izi ozi.
Mkpọchi gị gam akporo n'enweghị nsogbu na ihe mgbochi nwa mkpọchi iji gbochie achọghị-atụgharị na ọnụ ma ọ bụ na-ekwesịghị ekwesị ojiji site ụmụntakịrị nọ n'ụlọ.
Etu ị ga - esi nye gị gam akporo nchekwa ọzọ
Taa, m ga - egosi gị otu ị ga - esi nyefee gam akporo gị nchekwa site na igbochi ngwa iche iche yana igbochi ịnweta ntọala gam akporo.
Ihe iyi egwu ohuru site na nje komputa ozo dika “Mirai”
Mwakpo cyber-ọgụ ọhụrụ dị ike karịa nje Mirai dị nso. Ndị ọkachamara na-ekwu na ịntanetị nke ihe bụ ọnụ ụzọ ámá
Onye isi nchekwa Google kwuru na Pixel dị ka iPhone
Onye isi nchekwa Google kwuru na Pixel na iPhone nọ na par mgbe a bịara n'ihe nchekwa na ngwaọrụ mkpanaaka.
Anyị gwara ndị nche nchekwa abụọ gbasara malware gam akporo
Anyị na Josep Albors na Raphael Labaca na-akparịta ụka, ndị ọkachamara nche na ndị malware ga-emeghe anya anyị na mkpa nke antivirus maka gam akporo
Gam akporo Alert: Kpachara anya maka ozi PayPal, ha nwere ike ọ gaghị esi PayPal
Kpachara anya na ozi Paypal n'ihi na ha nwere ike ịbụ Phishing ma ọ bụ ozi adịgboroja na naanị nzube nke izu data gị dị ka okwuntughe na ndị ọzọ.
Windows Ndepụta nyocha nwere ike ịbịa gam akporo
Ebumnuche Microsoft na Windows Hello na ngwaọrụ gam akporo bụ na ị nwere ike ịbanye na PC gị site na ịnwe ekwentị gị
N'agbanyeghị ihe ị na-eme, gam akporo na-esochi ọnọdụ gị
Ọbụlagodi na ị gbanye ma ọ bụ hichapụ Google Maps, ngwa Google Play Store na-achọpụta ọnọdụ gị mgbe niile
Etu ị ga - esi mee nkwado ndabere nke foto gị na vidiyo yana ọrụ kachasị mma nke oge a
Iji kwado foto na vidiyo gị, enwere ọrụ abụọ na-enye arụmọrụ dị mma: Dropbox na Foto Google.
Motorola na-akwado na ọ gaghị ewepụta patch nche kwa ọnwa na ngwaọrụ ya
Motorola ekwuola na ọ gaghị emelite Moto ya na ihe nchedo Google na kwa ọnwa ma hapụ ha na melite ngwa ngwa.
$ 50 BlackBerry DTEK299 kwuputara, arụsị lekwasịrị Anya Nchekwa 4 Mmepụta oyiri
Ọ bụrụ na ị na-achọ ekwentị nke etinyebere na nchekwa na nzuzo, Blackberry DTEK50 bụ ezigbo ekwentị iji kpuchido data gị.
Kpachara anya !! Pokeradar maka Pokemon Go dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play na APK, anyị na-agwa gị ihe egwu nke ngwa a echere ogologo oge maka gam akporo.
ANDROID ALERT !!, data gam akporo gị nwere ike ịnọ n'ihe egwu mgbe anyị na-akwụ ụgwọ batrị
Taa, anyị na-enye gị ndụmọdụ ole na ole ka data dị na gam akporo gị anaghị anọ n'ihe egwu mgbe anyị na-ebugharị batrị nke ọnụ site na PC ma ọ bụ MAC.
ANYA !! BlackMart abanye n'ime Storelọ Ahịa Play n'okpuru aha BlackMart3 ma nweeworị nrụnye 500.000
A na-akpọlite ​​mkpu na obodo gam akporo mgbe ha hụrụ oghere nchebe na Google Play mgbe BlackMart3, ụlọ ahịa iji budata ngwa akwụ ụgwọ n'efu.
Ntughari Google bu uzo ohuru ohuru ohuru nke na eme ka nchekwa akauntu gi di mfe.
Ndi ị maara na dị ka Kelli Burns Facebook nledo anyị site na igwe okwu nke ekwentị anyị ma ọ bụ smartphone n'ihi ịge ntị na-adịgide adịgide?
Google na-enyocha 6.000 ijeri ngwa gam akporo kwa ụbọchị maka malware
Haslọọrụ Google ebipụtala akwụkwọ akụkọ nche kwa afọ nke ha na-ekwu na ha na-enyocha ọdụ 400 nde kwa ụbọchị n'ịchọ malware
Olee otú ndabere gị Samsung Iji Smart Gbanye
Taa, anyị na-akụziri gị otu esi eme nkwado ndabere nke Samsung gị site na iji Smart Gbanye, ngwa nke Samsung mepụtara nke ga-akwado ọrụ anyị.
Kemgbe mmelite ohuru nke Foto Google ị nwere ike ime ugbu a nkwado ndabere nke ihe oyiyi gị niile site na ngwa ahụ
Ọkwa egwuregwu a ma ama nke na-ekpuchi Apple iPhone ma hapụ ya ka ọ bụrụ ihe na-abaghị uru ruo mgbe batrị ga-agwụ
Egwuregwu a na-ekwu na ọ na-emejọ iphone Apple ma mee ka ọ baghị uru ruo mgbe batrị nke ọnụ ahịa emetụtara gwụ
Gam akporo Nchekwa na ọnọdụ. Kedu ihe ọ bụ na gịnị ka ọ bụ maka?
Taa, anyị chọrọ ịgwa gị ihe niile onye gam akporo onye ọrụ kwesịrị ịma ma mara maka Ọnọdụ Nchekwa gam akporo.
Kpaa nkata n'enweghị nsogbu ma chekwaa data gị nke ọma maka ozi nzuzo nke mgbama, Edward Snowden nwere WhatsApp echedoro
Ngwa ndị ọkachamara na-ahụta dị ka nkata kachasị nchebe na akụkọ mkpirikpi nke nkwukọrịta ọhụrụ ma ọ bụ WhatsApp dị nchebe nke Edward Snowden.
Android Alert! Onye nbipute 3D nwere ike ịgafe njikwa akara mkpisiaka
Ihe omumu ohuru n’egosi na iji ngwa nbipute 3D i nwere ike inweta mkpisi aka aka ugha iji duhie ndi na-agu ihe dijitalụ taa.
Otu esi emepụta igwefoto nchedo gị na-enye ọhụụ ochie gam akporo gị. Nzọụkwụ vidiyo site na ntinye
Taa a ga m akuziri unu n'uzo di nfe ma na etinyeghi otu euro, kedu otu esi eke igwefoto nche anyi
Kpachara anya na ozi na-akpọ gị òkù ka ị rụọ ọrụ oku vidiyo na WhatsApp !!. B A A GOTCHA !!
Ozi a na - akpọ gị ka ị rụọ ọrụ oku vidiyo na WhatsApp bụ ojoro ma ọ bụ oke ojoro. Emela pịa njikọ dị na ya !!
Ngwa kachasị mma iji gbochie ngwa site na ịnweta ikike
Ngwa kachasị mma iji gbochie ngwa site na nnweta na-enwetaghị ikike ma si otú a kpuchido nzuzo anyị megide ndị omekome ma ọ bụ iji ha eme ihe na-ekwesịghị ekwesị
Wifi na-ezu ohi na-aga ịkwụsị. Anyị na-akuziri gị otu esi ebipụ Wi-Fi na ngwaọrụ ndị enwetaghị ikike
Are bụ otu n'ime ọtụtụ ndị metụtara na-eche na a na-ezuru Wi-Fi ha. Ọfọn, izu ohi WiFi ga-akwụsị
Instagram na-agbakwunye mgbakwunye nchekwa nke nchekwa yana nyocha ihe abụọ
Nche na-aghọ ihe dị mkpa maka Instagram nke na-ewe nyocha abụọ site na taa.
LG Fixes Vulnerability Nke metụtara ọtụtụ nde ekwentị G3
Nde G3s bụ ndị nsogbu emetụtara na LG edozila
Olee otú iji chebe gị gam akporo megide screenshots.
Ọhụrụ a post anyị nwere ike ikwu a free ngwa nke ga-enyere gị aka ichedo gị gam akporo megide screenshots.
XNSPY, nke kacha mma nledo software gị ama
XNSPY bụ spy software n'ihi na gị gam akporo ngwaọrụ na nke i nwere ike nyochaa ọrụ nke gị na ụmụ gị na-ha mma
Ihe ise kacha ekwukarị banyere aghụghọ site na WhatsApp na 5
WhatsApp abụwo isi iyi nke aghụghọ aghụghọ na afọ niile. Taa, anyị na-enyocha ndị kacha ewu ewu na 2015.